IMINYANGO YASEFRANCE (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iminyango yaseFrance (Isikhokelo sokugqibela)
Iminyango yaseFrance (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela kwiingcango zaseFrance kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo, ubukhulu, indleko, iingcebiso zokuthenga kunye nokunye.
Ukuba ufuna ukuchukumisa isitayile esiqhelekileyo ekhayeni lakho, iingcango zaseFrance zinokuba yeyona nto ukubheja kwakho. Banikezela ngobuhle obuhle kwaye bavela kwiindlela ezininzi ukuze ukhethe eyona ilungele wena nekhaya lakho. Awungekhe uhambe ungaboni, nangona kunjalo, ke sidibanisa isikhokelo sokugqibela ukukuxelela yonke into oyifunayo malunga neminyango yaseFrance.
Ziziphi iiFango zaseFransi?
Ucango lwaseFrance luhlala lusiseti. Uninzi lwexesha, zizibini zeminyango emibini, enye ecaleni kwenye. Zihlala zibonakaliswa ziipaneli zeefestile ezolulela kufutshane nobude bomnyango, ngamanye amaxesha zishiya umda opaque ujikeleze udonga lomnyango.
Uya kuqaphela ukuba uninzi lweengcango zaseFrance ziyazivalela. Ngamanye amagama, abanalo umqadi othe nkqo phakathi kweengcango. Ngale ndlela, unokuba nomnyango ovaliweyo ujonge okanye ungabashiya bejarar kwindawo evulekileyo ngokupheleleyo.
Isizathu esinye sokuba ufune iingcango zaseFrance kukubhenela kwabo kubuhle. Banenkangeleko ebabazekayo kunocango oluqhelekileyo kwaye ke banike indawo abakuyo kwisibheno esimangalisayo.
Iingcango zaseFransi zikwanombane. Kuba ngokwesiqhelo zenziwe ikakhulu ziifestile, zivumela ukukhanya okuninzi kwendalo kwisithuba ezifakwe kuzo kodwa zikwabandakanya umda opaque esiwukhankanyileyo ukugcina umoya obandayo ungangeni okanye uphume endlwini yakho. Uninzi lweengcango zaseFransi zifakiwe kwaye zakhiwa ngendlela enceda ukugcina umoya - ushushu okanye ubanda- ngaphakathi endlwini yakho.
Ubungakanani beeFrench Door
Iindleko zeeFango zaseFrance
Iindidi zeeFango zaseFrance
Iingcango zomthi zaseFrance
Iglasi Igumbi laseFrance
Iminyango yaseFiberglass yaseFrance
Isinyithi saseFrance Doors
Ukutyibilika iminyango French
Amagumbi amaFrentshi amaFrentshi
Amasango ePocket French
Iminyango yesiFrentshi yesiqhelo
Amagosa aseFrance angaphandle
Iminyango yaseFrance yangaphambili
Umnyango waseFrance noMnyango weNja
Amasango ePatio amaFrentshi
Iingcango zePatio eziTyibilikayo zaseFrance
Amagosa aseFrance angaphakathi
Igumbi lokulala Amasango aseFrance
Igumbi lokutyela iingcango zaseFrance
Amasango amaFrentshi angatshatanga
Amasango eFrench Closet
Iminyango yokuhlamba yaseFrance
Amasango amaFrentshi anamhlanje
Ukhuseleko lweFrench Door
Isixhobo seFrench Hardware
Ukufaka iiFrench Doors
Iminyango yamaFrentshi vs.
Abavelisi beFrench Door abadumileyo
IPella Iminyango yaseFrance
UJeld Wen Amasango aseFrance
Amasango amaFrentshi aseAndersen
Iminyango kaMarvin yaseFrance
Milgard Iminyango yaseFrance
Kuphi ukuFumana iiNdawo zeAntique zaseFrentshi ezithengiswayo
Xa ujonge ukuthenga iseti yeminyango yesiFrentshi yekhaya lakho, kufuneka kuqala wazi ukuba bungakanani ubukhulu obulinganayo ekhayeni lakho. Umnyango omnye kuphela uhleli ngeenyawo enye kunye nee-intshi ezi-6. Oku kuthetha ukuba xa useto oluqhelekileyo lweengcango zaseFrance, ubungakanani bakho obuncinci buya kuba ziinyawo ezi-3 kuzo zombini iingcango.
Kwiingcango zaseFrance eziphindwe kabini uya kuthi njengoko unokuthekelela, phinda obu bungakanani kwii-6 iinyawo. Ukucaca, iingcango ezimbini zaseFrance zihlala zisecaleni kweengcango zaseFrance.
Uyakufuna kwakhona ukulinganisa ukujinga kweengcango zakho zaseFrance ngaphambi kokuba uzifake nazo. Ujingi lomnyango uyakulingana nobude bawo. Ke, kwiingcango ezininzi, umgama wokujika kufuneka ubuncinci unyawo kunye nee-intshi ezi-6.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ubungakanani bomnyango bunokutshintsha. Ukuba ufuna into eyahlukileyo kunesiqhelo, unoku-odola iingcango zakho ngotshintsho kubungakanani ngokunyuka kwee-intshi ezi-2.
Xa ucinga ukufaka iingcango zaseFransi ekhayeni lakho, kuya kufuneka uqwalasele iindleko zale projekthi.
Ixabiso eliphakathi leengcango zaseFrance ikakhulu lixhomekeke ekubeni umnyango ungaphakathi okanye ngaphandle. Ezi ndleko zimbini ziphambili ozenzayo xa ufumana iingcango zaseFrance ziindleko zeminyango ngokwawo kunye neendleko zokuba inkampani ikufakele iingcango ekhayeni lakho.
Kwizinto eziphathekayo, uluhlu oluhlala luhlala luhlala phakathi kwe- $ 300 kunye ne-3,000. Oku kunokuxhomekeka ekubeni zibaluleke kangakanani na izinto ozikhethayo kunye nendlela eziphathwa ngayo. Umzekelo, ucango lwangaphakathi lwesiFrentshi olwenziwe ukugcina nje ikhabethe lakho livaliwe alunakubiza malungana nomnyango wangaphandle waseFrance ekufuneka uphathwe ukuphatha izinto. Ixabiso eliqhelekileyo lokungena ngaphakathi kumnyango waseFrance ujikeleze i-200 yeedola inye. Ngelixa umnyango wangaphandle wepatio waseFrance uza kukusetha umva malunga ne- $ 2500 ngokomndilili.
Ke kukho iindleko zabasebenzi. Ufakelo lweengcango zaseFrance zihlala zibiza malunga ne- $ 500 ukuya kwi- $ 1,000. Eli xabiso lixhomekeke kwizinto ezimbalwa ezinje ngokuba uhlala phi. Ngokufanelekileyo, nangona kunjalo, unokuxhomekeka ekubeni yeyiphi ikontrakta oyikhethileyo kunye nokuba enkulu kangakanani iprojekthi ojonge kuyo ukumisela amaxabiso. Umzekelo, ufakelo olulula lomnyango waseFransi luya kubiza imali encinci kunengcango lesiFrentshi, olo fakelo lunzima. Ngamafutshane, umsebenzi omninzi kwikontraka owenza ufakelo, kokukhona kuya kubiza iingcango zaseFrance kuwe. Uninzi lweenkampani ziya kubiza indleko emnyango nganye.
Ungagcina iindleko ngokufaka iingcango zakho zesiFrentshi, nangona kunjalo. Ukuba u-DIYer onokuzithemba, ukufaka iseti yeengcango akuyiyo eyona nto inzima yokuphucula ikhaya nangona iingcango ezityibilikayo zingangqina mngeni xa kuthelekiswa neengcango zesiFrentshi zemveli. Izinto ezimbalwa ekufuneka uqiniseke ukuba uzenzile, nangona kunjalo, kukulandela izikhokelo zomenzi kunye nokulinganisa umgama ngononophelo ukuze iingcango zikwazi ukuvula ngokulula xa sele zifakiwe.
Xa ujonga iingcango zaseFrance, unokukhetha ezimbalwa malunga neentlobo zeminyango onokuyifumana. Apha, siza kujonga ukhetho lwakho.
Olunye ukhetho oluqhelekileyo xa kuziwa kwiminyango yaseFrance kukusebenzisa iingcango zomthi. Olu lukhetho olukhulu kuba ukhuni lomelele kwaye lunokubonelela ngesiko lendalo kuyilo lwangaphakathi.
Unokukhetha okuninzi okwahlukileyo malunga nendlela umnyango wokhuni ojongeka ngayo kuxhomekeke kuhlobo lomthi kunye nokugqitywa okukhethiweyo. Awunakukhathazeka malunga neengcango zaseFransi zangaphandle ezenziwe ngomthi ezonakaliswayo nokuba uninzi lugqityiwe ngendlela yokuqinisekisa imozulu ukubakhusela kwizinto.
Icala elisezantsi kwiminyango yamaplanga yesiFrentshi kukuba ayizizo zonke ezivumela ukukhanya kwendalo njengoko, umzekelo, umnyango weglasi waseFrance unganikezela. Nangona kunjalo, ezinye iingcango zokhuni zijolise ekubeni nefestile eninzi kangangoko ukwenza umnyango.
Iingcango zeglasi zaseFransi zivumela ukukhanya kwendalo okuninzi. Banokuba bahle kakhulu. Abantu abaninzi bacinga ngeepaneli zeglasi ezingenanto xa kufikwa kwiminyango yaseFrance kodwa unokhetho lokuhombisa okanye lweglasi enefestile.
Uninzi lwale minyango alwenziwe ngokupheleleyo ngeglasi. Endaweni yokuba umzimba ongaphambili womnyango wenziwe ngeglasi enemigca eyenziwe ngezinto ezinamandla ezinje ngomthi okanye ifayibha yeglasi yeengcango zangaphandle, okanye i-MDF (eyenziwe ngomthi) yeengcango zangaphakathi.
Eyona nkxalabo iphambili abantu abanayo ngeengcango zeglasi kukuba baya kuba buthathaka. Oku kunokubonelela ngombandela ngokunxiba kunye nokhuseleko.
Uninzi lweengcango zeglasi zisebenzisa iglasi eyomeleleyo ephathwa ukuba ichithwe ukhuseleko kunye nokukhuseleka. Oku kuyanceda nakwiimozulu ezibi kakhulu.
Iingcango zeglasi zaseFrance- jonga eWayfair
IVinyl yindawo esekwe kwiplastiki esetyenziswa rhoqo kuyo yonke into ukusuka kwiingcingo ukuya kwiingcango zaseFrance. Ngelixa into inokuthi yenziwe nge-vinyl, oko akuthethi ukuba inembonakalo yeplastiki. Ngapha koko, ivinyl ihlala isetyenziselwa ukulinganisa ukubonakala kwezinye izinto ezinje ngomthi. Zisetyenziswa ubukhulu becala kuba zibiza indleko, zonga amandla kwaye ziyahlala.
Ungahle ungene engxakini ngeminyango yaseFrance yevinyl xa kufikwa kubushushu. Ayinakubangela kuphela ukuba amaqondo obushushu akhokelele ekwandiseni okanye ukurhoxiswa kweengcango, oku kungakhokelela kwintanda kwi-vinyl. Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba i-vinyl yinto enokutsha.
I-fiberglass luhlobo lweplastiki eqinisiweyo edityaniswe nefayibha yeglasi ukuyenza yomelele. Ezi ntlobo zeminyango zilula kwaye zinobomi obude ngokubanzi kuneengcango ze-vinyl ngokomndilili. Nangona kunjalo, ukurhweba xa kuthelekiswa i-vinyl vs.Fibreglass lelona xabiso liphezulu.
Zingaphi izihlandlo utshatile ixilongo
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga ne-fiberglass inokudalwa ukuba ifane neengcango zokwenziwa kweenkuni ngaphandle kwako konke ukugcinwa okufanayo nomthi. Ukongeza iingcango ze-fiberglass zisebenza ngamandla kwaye ziyakhiwa ukutshatisa iintlobo zeendlela zoyilo.
Iingcango zesinyithi zaseFrance zinokwenziwa ngezixhobo ezahlukeneyo. Kwenye, kukho intsimbi. Isinyithi somelele ngokuchasene nezinto kwaye silungile kukhuseleko. Kukwalula ukuba zikhathalele ukubonelela ngendlela efanelekileyo yokumisa. Kwelinye icala, ngelixa bengazukugoba, banokuba nomhlwa, bakrwemeke, okanye bajiye.
Unokukhetha kwakhona umnyango wealuminium. Ezi zilungile kuba azina rusi njengohlobo olwahlukileyo lwesinyithi olufana nentsimbi. Ukongeza, zilula ukuzinyamekela kwaye zilula kuneengcango zentsimbi. Zikwanamaxabiso afanelekileyo, ngenxa yoko awuzukuhlawula ngaphezulu ukuze ube neengcango zealuminium french ekhayeni lakho.
Iingcango zaseFrance zivula ngaphakathi okanye ngaphandle kwihenjisi kodwa enye indlela kukutyibilika. Ezi minyango zihlala emgceni kwaye zinobunzima ukuze zilayishwe zivuleke kwaye zivalwe ngokulula. Ziye zahlwaywa ngomnyango ochanekileyo kunye nomnyango ohambayo. Ezi ndlela, nangona kunjalo, zinokungcola. Ukuba awugcini ucocekile, uya kubaleka kwimicimbi yokugcina umnyango wakho usebenza kakuhle.
Iingcango ezityibilikisayo zenziwe ngeepaneli ezinkulu zeglasi ukuze kungene ukukhanya. Ngaphezulu, zihlala zingabizi kakhulu kunocango lwesiFrentshi. Siza kujonga ngakumbi kuthelekiso lweengcango ezityibilikayo xa kuthelekiswa neminyango yesiFrentshi emva kwexesha.
Njengoko sele siphawulile, iingcango zesiFrentshi zesiko zisebenza kwihenjisi kwaye zivulekele ngakuyo okanye kude nomntu ozisebenzisayo. Iingcango zaseFrance ezinamacala amabini, kwicala eliphikisayo, zahlukile kancinane. Endaweni yokusebenza kwiseti yeehenjisi okanye umkhondo, bazisebenzisa zombini. Ngokwesiqhelo zihlala zineengcango ezimbini okanye nangaphezulu ezinxulunyaniswe kwihenjisi. Xa zisetyenzisiwe, ziyagoqana ziye kwelinye icala ukuya ecaleni kunokuvula njengomnyango wesintu.
Amaxesha amaninzi, uya kuzibona zisetyenziswa apha iingcango zekhabethe . Zingasetyenziswa naphina kwaye zinokuba lukhetho olukhethekileyo lokongeza isitayile sodidi olunye ekhayeni lakho.
Olunye ukhetho olunomdla yiminyango yeepokotho zaseFrance ezisebenza kakhulu njengokutyibilika kweengcango kodwa ngengoma ephezulu kumnyango njengecango elinesiqingatha saseFrance. Abasongeli njengamacango aphindwe kabini kodwa batyibilike, ngamanye amaxesha ngaphambili okanye ngasemva kweengcango okanye iindonga.
Iingcango zokwenyani zesiFrentshi zihlala zinento ebizwa ngokuba yipokotho yangaphakathi. Ngomngxuma ongaphakathi, ucango lwaluya kuthelela ngokungathi lungena eludongeni. Njengomnyango oqhelekileyo oslayidayo, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba umkhondo ugcinwa ucocekile kwaye ugcinwe kakuhle ukuze iingcango ziqhubeke ukutyibilika ngokulula. Ezi zihlala zisetyenziswa njengeengcango zaseFrance zangaphakathi.
Unokufumana iseti yeengcango zaseFrance ezenziwe ngokwesiko kwiinkcukacha zakho. Ngenxa yolo hlobo, uya kuba nexabiso eliphezulu kunokuthenga iseti yeminyango yesiFrentshi esemgangathweni. Olu lukhetho olukhulu ukuba unendawo evulekileyo engaqhelekanga okanye ubungakanani obafuna ukubeka umnyango waseFrance kuyo.
Iingcango zesiFrentshi zesiko zikwalungele ukuba nembonakalo eyodwa ekhaya lakho. Ukuba ufuna uyilo awunakufumana kwenye indawo, umzekelo, unokulufumana olo uyilo kumnyango owenziwe ngesiFrentshi.
Iingcango zangaphandle zesiFrentshi zihlala zenziwe ukuba zomelele kancinane kuneengcango zaseFrance zangaphakathi kuba zenziwe ukuba zime kwizinto. Ngaphezulu kweloo, zikwenzelwe ukuba zigcine abangeneleli kwaye zikhusele ngaphakathi.
Indlela entle yokusebenzisa iingcango zaseFrance njengokungena ekhayeni lakho. Le yindlela entle yokwenza umnyango omkhulu. Ngokwesiqhelo, ezi ntlobo zeminyango yesiFrentshi zincinci ngakumbi kuneengcango zangaphakathi zaseFransi njengendlela yokuzenza zibe banzi ngakumbi. Ukhetho olunomdla kunye neengcango zangaphambili zaseFrance kukuzibopha zigobele phezulu endaweni yomgca othe ngqo ophela nge-90 degrees ngapha nangapha. Iimpawu zesiko ezinje ngentsimbi eyenziweyo okanye iingcango zomango ezigqityiweyo zinokunceda ukwenza umbono wokuqala kubakhenkethi.
Ingcango yenja enemingxunya yeengcango zaseFrance-jonga kwi IAmazon
Ukuba unenja, unokufuna ukuba umnyango wangaphambili okanye umnyango wepatio ube nomnyango wenja ukuze isilwanyana sakho size kwaye sihambe njengoko sifuna. Oku kunokuba yinto encinci ngakumbi kumnyango weglasi waseFransi kunocango lwesiFrentshi, umzekelo. Nangona kunjalo, oku kungasebenza ngokujikeleza ngokutshintsha ipaneli esezantsi ngomnyango wenja enemingxunya.
Enye indlela yokusebenzisa umnyango waseFransi njengomnyango wangaphandle yindlela esele sichazile ngayo: umnyango wepatio waseFransi. Le minyango ikhokelela ngaphakathi kwekhaya lakho ukuya kwipatio ebonelela ngembono kwiyadi yangasemva kunye nokukhanya kwendalo okuninzi .. Kuba le yiminyango enokuthi ishiywe ivulekile ukonwabisa, uyakufuna uyilo lwesitayile.
Olunye ukhetho olongezelelekileyo onalo xa kufikwa kwiminyango yepatio lucango lwepatio olushenxayo. Ezi minyango zihlala zitshibilika kumkhondo kunokuba zivulwe njengeengcango zaseFrance eziqhelekileyo. Olu lukhetho olukhulu kuba kulula ukuluqhuba kwaye, kuba zihlala zenziwe ngeglasi, vumela ukukhanya kwendalo okuninzi kungene ekhayeni lakho.
Unokusebenzisa iingcango zaseFrance ngaphakathi kwekhaya lakho. Iminyango yaseFrance inokuba sisongezo esihle kwigumbi lokulala, umzekelo. Ndwendwela igalari yethu iintlobo umnyango ngaphakathi ukufumana ezinye izimvo.
Kukho into ebutofotofo kunye nothando malunga neengcango zaseFrance eziphindwe kabini ezivula kwigumbi lokulala ukusuka kwipatiyo. Ngale minyango ungakhangela kwi-balcony yakho okanye kwipatiyo yangasemva kunye nokuxhamla kukukhanya kwendalo kunye nesitayile sokuhombisa.
Igumbi lokulala elihle elineminyango eluhlaza okwesibhakabhaka yaseFransi ekhokelela ngasemva kwendlu.
Eli gumbi lokulala libonelela ngeengcango ezintle eziphindwe kabini zaseFrance ngeefestile zepaneli eziqinileyo kunye neepaneli zomqheba ecaleni.
UKUYA igumbi lokutyela elineminyango yaseFrance inokuba ntle kwaye iyamema. Ungazifumana ezi minyango zilingane ngokugqibeleleyo nasiphi na isitayile sokuyila segumbi lokutyela langoku, okanye langoku kwinto yesiqhelo. Iingcango zaseFrance zivumela umntu ukuba achaze indawo yokutyela kunye nokungena nokuphuma. Ukongeza banokungenisa ukukhanya kwendalo kwiipaneli zeglasi zabo kwaye benze ukukhohlisa kwendawo enkulu.
Akuqhelekanga ukuba ikhaya libe neendlela zokuyila ezikhuthaza igumbi lokudlela kunye namagumbi okuhlala ukuba adibaniswe. Ukufaka iingcango zaseFrance kuvumela olu nxibelelwano, ngelixa unika umninikhaya amandla okuvala kwigumbi lokutyela xa imeko ifuna oku.
Uninzi lweengcango zaseFrance ziza ngababini, nangona kunjalo usenokufumana iingcango ezizodwa zokwenza umxholo odibeneyo ekhaya lakho. Unokufumana iingcango zangaphandle ezingaphandle ezinezibane ezisecaleni (ukufakwa kwefestile yaseFrance) okubenza ukuba balingane ubungakanani obungonelanga ngokwaneleyo kwiminyango emibini ecaleni.
Iminyango yaseFrance lukhetho olukhulu kwizibiyeli ngokunjalo. Uyilo lwabo luvula indawo yekhabethe, inike inkohliso yokuba ikhabethe likhulu kunokuba linjalo.
Umnyango weFrench Shower - Jonga kwi IAmazon
Iishawari yenye indawo yekhaya elixhamlayo kongezwe iingcango zaseFrance. Le ngcamango efanelekileyo ngakumbi kubaninimzi abadala, abanokuba nobunzima bokungena nokuphuma kwisitya esisezantsi. Iingcango zaseFrance zibonelela ngokufikelela ngokulula njengoko zingadingi umsebenzisi ukuba anyuke ngaphezulu nangaphezulu kwebhafu.
Ngokuxhomekeka ekuhonjisweni kwekhaya lakho, iingcango zesiko lesiFrentshi zisenokungabi lolungileyo. Ukuba ufumanisa ukuba kunjalo, jonga kwiingcango zanamhlanje zaseFrance endaweni yoko. Iingcango zale mihla zaseFrance zidibanisa ukufikeleleka kwesitayile sendabuko, kunye ne-sleek, encinci encinci eqinisekileyo yokudibanisa nayo nayiphi na imihombiso yasekhaya.
Ewe, xa ufaka umnyango waseFransi, ufuna ukwazi ukuba baya kuhlala bevaliwe xa uwavala. Ukuba imeko embi kakhulu yenzekile, ufuna ukwazi ukuba iingcango zakho ziya kuhlala zikhuselekile kwaye uyakhuseleka ngaphakathi ekhayeni lakho. Xa kufikwa kukhuseleko lweengcango zakho, nangona kunjalo, unokukhetha ezimbalwa.
Kuqala, unokuhlala uhamba kunye neklasikhi yokutshixa yakudala. Ezi zizitshixo ezihlala zenziwe ngentsimbi kwaye zichazwa ngokusebenza ngokuguqula iqhina okanye isitshixo endaweni yokusebenza njengetshixo lesenzo sentwasahlobo. Ezi ntlobo zitshixwayo azaphuki lula okanye zinyanzelwe ukuba zivuleke ngenxa yendlela ezenziwe ngayo nezinto ezenziwe ngazo.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo zokukhiya kwe-deadbolt. Kukho i-cylinder efileyo enye, enye. Olu hlobo lwe-deadbolt lutshixa kuphela kwicala elinye-ngesiqhelo ngaphakathi liqhina. Ukuchasene ngqo kolu hlobo lwe-deadbolt kukufa kwesilinda kabini. Njengoko igama libonisa, olu hlobo lwe-deadbolt lunokutshixwa okanye luvulwe macala omabini. Ukuba uyayivula ngaphandle, nangona kunjalo, kufuneka ube nesitshixo.
Olunye lolona khetho lukhuselekileyo, kuya kufuneka ufumane isilinda esibhubhile esiphindwe kabini esifuna isitshixo kumacala omabini endaweni yelinye elinobambo ngaphakathi. Kuba iingcango zaseFransi ubukhulu becala ziyiglasi, oku kuthintela umntu ekuphuleni ngokulula iwindow kwaye ajikeleze ukuvula ucango. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kuba ezi ntlobo zitshixwayo azisebenzi kwinkqubo yasentwasahlobo ukuze kungabikho lula ukudityaniswa okanye ukwaphuka kuvulwe.
Okokugqibela, kukho i-deadbolt engenanto. Ezi zinokubhekisa kwi-silinda enye ye-knob efileyo okanye inokubhekisa kwinto ephezulu ngakumbi. Eminye imizekelo inokubandakanya isitshixo somnwe okanye ofaka ikhowudi kuyo ukuvula.
Kukho izinto ezithile ekufuneka uzigcine engqondweni xa ukhetha i-deadbolt. Ngobungakanani, kuya kufuneka uthathele ingqalelo i-deadbolt eyi-intshi enobubanzi kwaye yenziwe ngentsimbi. Qinisekisa ukuba akukho zixhobo ze-deadbolt, ezinje ngee-cylindrical locks ezinokubanjwa ngokulula ngeepleyiti okanye nasiphi na isixhobo sokuthintela nakuphi na ukuphazamiseka. Ukomelela, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ujonga ukuba izikhonkwane ezidityanisiweyo zingena kwisinyithi esomeleleyo endaweni yokujija iiposti kwaye ubuncinci ikota-intshi ubukhulu.
Nokuba ungakhetha oluphi uhlobo lwe-deadbolt, kuya kufuneka uqiniseke ukuba yindawo yokutshixa. Isitshixo sokufa sisibambiso kodwa endaweni yokutyibilika ekhaya ungene emngxunyeni kumnyango wesibini waseFrance okanye isakhelo somnyango, singena ngaphakathi kwindlu yesinyithi. Ngokuvalwa kwezidumbu, isitshixo sifakelwe emnyango nakumnyango wesibini okanye isakhelo esenza ukuba kube nzima ukophula indlu ngokutshixa okanye izinto ezijikelezileyo.
Ingxaki nge-deadbolt elula ayisebenzi kangako kwiminyango yaseFrance kuba, ixesha elininzi, endaweni ye-deadbolt ityibilika endaweni kwisakhelo somnyango, ityibilika kwindawo yesibini kwisibini seminyango yaseFrance. Le yinkqubo engakhuselekanga kangako kuba olo cango alomelelanga njengesakhelo somnyango.
Ukulwa nale nto, kuya kufuneka usebenzise inkqubo yokutshixa kwamanqaku amathathu. Olu hlobo lwenkqubo yokutshixa isebenzisa iintonga zentsimbi ezonyukela phezulu kwisakhelo somnyango kwaye ziye ezantsi emgangathweni, ukunika ukhiye wakho ukomelezwa kancinci.
Ngaphandle kwesitshixo, kuya kufuneka uthathe amanyathelo okhuseleko xa ukhetha kwaye ufake iingcango zaseFrance.
Kokunye, kuya kufuneka uqiniseke ukuba izinto ezenziwe ngocango lwakho lwesiFrentshi zenziwe ngezinto ezomeleleyo. Nokuba ukhetha ukhuni, isinyithi, okanye ivinyl, ucango lwakho kufuneka lomelele ngokuchasene nomntu ozama ukuluqhekeza okanye aluvule ngenkani.
Oku, ewe, kuzisa engqondweni ukuba iingcango zaseFrance zenziwe ngeglasi eninzi. Kwezokhuseleko, abanye abantu baya kuphakamisa ukuba kufuneka uzame ukufumana iingcango zaseFrance ezineminyango engaphezulu kunye nefestile engaphantsi koyilo lwesiko. Ukuba ufuna olu luyilo lwesiko, nangona kunjalo, awunyanzelekanga ukuba uncame ukhuseleko lwakho. Endaweni yoko, jonga iingcango zaseFrance ngeglasi eyomeleleyo.
Kubalulekile ukuba ujonge uhlobo olufanelekileyo lweglasi enqatyisiweyo xa ukhetha umnyango. Umnyango oneglasi enomsindo, umzekelo, womelele kodwa ayilolokhetho lwakho lomeleleyo. Olona khetho lomeleleyo onokuthi ulukhangele yiglasi enganyangekiyo. Olu hlobo lweglasi luyanyangwa ukumelana nemozulu egqithileyo ezinje ngezaqhwithi kwaye kude kufuneke kwiindawo ezininzi apho iinkanyamba zixhaphake khona. Olu hlobo lweglasi luluncedo kakhulu ngokuchasene nabaphangi.
Kuya kufuneka uyazi ukuba ukuba umntu uzimisele, banokungena ngokususa iihenjisi emnyango wakho. Ukuba iingcango zakho zivulekile ngaphandle, oku kuthetha ukuba iihenjisi zeengcango zakho zingaphandle kwaye zinokuphazanyiswa. Ke, ukuba ufuna ukuthintela ingxaki ngokupheleleyo, vula iingcango zakho ngaphakathi ukuze iihenjisi zingaphakathi.
Ukuba ufuna ukuba iingcango zakho zijike ngaphandle, ungafaka iihenjisi zokhuselo. Endleleni iihenjisi zokhuselo zisebenza ngokusebenzisa izikhonkwane ezingasuswayo endaweni yezikere ekufakweni kweehenjisi. Ngale ndlela, abanakususwa ngaphandle. Olunye ukhetho kukusebenzisa iscrew okanye izikhonkwane kwiihenjisi. Olu hlobo lofakelo lwehenjisi lukhuselekile kuba umnyango kufuneka ubekwe kwindawo evulekileyo ukuze ususwe ukuze kungenziwa ngendlela eyahlukileyo-ukususa ihinji ukuvula ucango.
Isinyathelo esongezelelweyo onokuya kuso ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwakho kukusebenzisa ibha yokhuseleko. Ezi zihlala zihlala zingqiyame ngasemnyango ngekona, zihlala zixhaswa ngaphantsi kweqhina lomnyango ukukhusela nabani na ekuvuleni umnyango. Kukho ezinye iindlela zobuchwephesha obuphezulu apho ukuba ibha yokhuseleko izanywa ukunyanzelwa ukuba ibuye, ialam iya kulila, ikuxwayise ngomntu onokuthi angenelele.
Olunye uhlobo lwe-bar yokhuseleko lwaluza kolulela kuzo zombini iingcango ngokuthe tye kwaye lutshixe eludongeni ngapha nangapha. Olukhetho olulula kwiminyango yaseFrance iya kuba kukufumana ibha yokhuseleko ejikeleza izibambo zeengcango zombini, zibenza ukuba kungabikho mandla okuvula.
Okokugqibela, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukufaka ialam yomnyango ekhayeni lakho. Lo ngumlinganiselo wokhuseleko ophendulayo ngakumbi kunothintelo kodwa sisigqibo sokugqibela esilungileyo. Ngokwesiqhelo, ezi zisebenza ngokuhlala ecaleni komnyango wakho kwaye usebenze xa kuvulwa umnyango. Ngokwesiqhelo, uya kuba namaxesha ambalwa wokufaka ikhowudi yakho yokungasebenzi xa ugcina ialam yakho ixhobile rhoqo ukubonisa ukuba nguwe okanye umntu omvumele ukuba angene ekhayeni lakho.
Indlu yasekapa yanamhlanje
Ukuba umntu ongenayo i-alamu engena okanye anyanzele ucango ukuba luvuleke, ialam iya kukwazisa, isoyikise umntu ongenayo, kwaye ilumkise iinkonzo ezingxamisekileyo zale meko ukuze zikuthumele uncedo nokuba awufumani kwifowuni.
Xa ukhetha iseti yeengcango zaseFrance, kuyakufuneka ukhethe izixhobo zekhompyuter ukuze ufake ezo minyango. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ukhetha i-hardware ehambelana nomnyango kwaye ehambelana nayo kuba uninzi lwayo luya kubonakala. Ngaphambi kokuba ukhethe i-hardware yakho, kufuneka ukwazi ukuba uluhlobo luni lwe-hardware oza kulifumana.
Okokuqala nokuphambili, udinga isiphatho somnyango wakho. Ukulungiselela le njongo, uneendlela ezimbini eziphambili onokukhetha kuzo. Oku kubandakanya isiphatho sesibambiso kunye neqhina. Iqhina lukhetho oluqhelekileyo kwiminyango kwaye sisixhobo nje esingqukuva okanye esesilinda. I-lever isebenza ngendlela efanayo neqhina kodwa ihlala isolula ngokuhambelana nomhlaba kwaye ijikwe kwi-90 degree angle ukuvula umnyango.
Iqhina lomnyango lingena kwisithuba esaziwa ngokuba ngumngxunya wokungxola. Oku kuhambelana nomngxunya onqamlezileyo osecaleni lomnyango apho kuhlala khona i-latch. I-latch kunye neqhina ngamaqhekeza e-Hardware kodwa zihlala zithengiswa kunye ukuze ube lula. Uya kudinga ukuba uqaphele umgama osuka emaphethelweni omnyango uye emngxunyeni. Oku kubizwa ngokuba ngasemva. I-backset esemgangathweni ingaba yi-2 ⅜ okanye i-2 ¾. Ngokuqhelekileyo, uya kufumana iingcango nge-2⅜ backset.
Kuya kufuneka ubuthathele ingqalelo ubukhulu bomnyango wakho. Uninzi lweengcango, uya kufumanisa ukuba ubukhulu buxhomekeke ekubeni ingaphandle okanye umnyango wangaphakathi. Ngomnyango wangaphandle, ubukhulu buhlala bukhulu kunomnyango wangaphakathi, uhleli kwi-1 ¾ ubukhulu. Umnyango ongaphakathi, kwelinye icala, uhlala u-1 ⅜ intshi ubukhulu. Kukho iingcango ezihleli ngaphandle kwesi siqhelo, nangona kunjalo.
Khumbula, xa ufumana isiphatho somnyango, kuya kufuneka ufumane isitrayikhi se-latch. Yilapho i-latch yomnyango omnye iya kungena emnyango wesibini. Oku kwenzelwa ukuba bahlale bevalekile. Uya kufuna ukufanisa i-latch yakho nesitrayikhi sakho se-latch ukugcina ujongano oluhambelana. Zintathu iintlobo eziphambili zee-latches ezibandakanya i-latch yekona yesikwere, i-latch yekona ejikeleziweyo, kunye ne-drive kwi-latch. Ungabahlula bodwa ngokobungakanani bendawo ejikeleze i-latch uqobo lwayo-ipleyiti yokufa. I-latch yekona yesikwere, njengoko igama lisitsho, iikona zesikwere, i-latch yekona ejikelezileyo ineekona ezijikelezileyo, kwaye idrive kwi-latch incinci kwaye ijikeleze.
Okwesibini, uya kufuna ukutyala imali kwiseti yeehenjisi. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ezi azifuneki kumnyango oshukumayo kodwa kuwo nawuphi na umnyango ovula ngaphandle okanye ngaphakathi, uya kudinga iihenjisi. Ngokwesiqhelo, uya kudinga iihenjisi ezimbini okanye mhlawumbi ezintathu kumnyango ngamnye. Uya kufuna ukulinganisa ngononophelo apho ezi zinto zihamba khona kwaye ukhumbule ukufumana izixhobo ezifanelekileyo zokubamba. Kukho iindlela onokukhetha kuzo xa kufikwa ekufakweni kweehenjisi. Umzekelo, ungasebenzisa izikhonkwane eziqhelekileyo okanye ungasebenzisa izikhonkwane kwihenjisi ekhuseleke ngakumbi engenakususwa ngokulula. Amanqwanqwa lukhetho oludumileyo lokuphuma ngaphandle kweengcango ngenxa yoku.
Into yokugqibela oya kuyidinga emnyango wakho kukutshixa. Ukhetho oluqhelekileyo xa ukhetha isitshixo seminyango yaseFrance yinto efileyo kuba lukhetho olomeleleyo nolukhuselekileyo. Kule nto, kakhulu njengeqhina lomnyango, uya kufuna ukufumana i-deadbolt uqobo kunye nesitrayikhi se-deadbolt se-deadbolt sokutyibilika ekhaya xa sitshixa. Unokukhetha ezimbini eziphambili xa kufikwa kwiibhedi ezifihlakeleyo - isilinda kabini okanye isilinda enye. Oku kuthetha nje ukuba uyafuna ukutshixa ngesitshixo macala omabini okanye elinye.
Unokhetho lwesitshixo esilula sokujika. Ezi zitshixo zifuna ukuba ujike kuphela iqhina ukuze utshixe iingcango. Zifakelwe ngendlela efanayo neebholtile kodwa azinakulunga xa kufikwa kukhuseleko.
Nokuba ungakhetha eyiphi indlela yokutshixa, kuya kufuneka uqiniseke ngokulinganisa ngononophelo iziko lakho ukuya kumlinganiso weziko okanye umlinganiso weCC. Lo ngumgama osuka kwisiphatho somnyango uye kwisitshixo.
Uyakufuna ukutyala imali kwimozulu yomzi wakho. Imicu yemozulu ihlala isiqwenga serabha esiya kwisakhelo seengcango. Umsebenzi wabo kukwenza itywina xa ucango luvaliwe ukuqinisekisa ukuba ucango lwakho lusebenza ngamandla okanye, ngokweendlela ezahlukeneyo, zisetyenziselwa ukugcina ukhusela ikhaya lakho kwizinto ezingena ngaphakathi.
Xa uthenga ezi ziqwenga zehardware, kuyacetyiswa ukuba uhlale ngaphakathi komgca omnye weempawu ukuba ufuna zonke iziqwenga zakho zilingane. Emva kwayo yonke loo nto, kukho iintlobo ngeentlobo zokugqitywa kwezinto ezahlukeneyo kwaye kunokuba nzima ukuzidibanisa xa usiya ngaphandle komgca wophawu. Oku kuyinyani ngakumbi xa uthenga kwi-Intanethi.
Njengoko sele sichazile kweli nqaku, unokukhetha ezimbini xa ufuna iminyango yaseFrance ekhayeni lakho - ungazifaka okanye ungazifaka ngokwakho. Iindleko zokufakelwa yinto esele sidlulile kuyo ke makhe sijonge indlela onokuzifaka ngayo iingcango zakho zesiFrentshi.
Ukuqala, uya kufuna ukususa umnyango omdala kunye nesakhelo. Unokwenza oku ngokuprinta isakhelo esidala ngaphandle kwemivalo ye-pry kodwa isiphelo sesando esisetyenzisiweyo sinokusebenza nakwiphini. Xa ususa i-trim, uyakufuna ukulumkela ukuba ungayonakalisi kuba uza kuyifaka kwakhona kamva. Ukongeza, unokufuna ukuleyibhula ezi ziqwenga ukwenza ukuba kube lula ukuzibuyisela kamva. Iteyiphu yompeyinti ilungele oku kuba iphuma ngokulula kumacandelo e-trim xa sele ukulungele ukutshintsha.
Ngaphambi kokuba uqhubele phambili, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ukuvula kwakho umnyango kulunge ngokugqibeleleyo. Ukuqinisekisa ukuba iikona ziidigri ezingama-90, ungasebenzisa isikwere somchweli kwaye unokuqinisekisa ukuba imiphetho yokuvula ithe tye ngokusebenzisa inqanaba elide.
Ngoku uya kufuna ukufaka isakhelo somnyango esitsha. Uya kufuna ukusebenzisa i-shims xa usenza oku. I-Shims ziziqwenga ezicekethekileyo zesinyithi esidityanisiweyo okanye esidityanisiweyo. Zisetyenziselwa ukunika inkxaso, zibonelela ngomgangatho wenqanaba, kunye nokugcwalisa izikhewu kunye nokubonelela ngokulunge ngakumbi kwesakhelo ngokuchasene nokuvulekileyo.
Emva koko, uyakufuna ukumba imingxunya yokuqhuba kwisakhelo kunye neesms. Apha, uya kufuna ukufaka izikhonkwane kodwa kude kube kude ngokwaneleyo ukuba ubambe isakhelo endaweni okwangoku - awenzi nto esisigxina ngezi zikhonkwane. Uya kuvavanya ukulunga emnyango ngaphambi kokuba wenze nayiphi na intshukumo esisigxina.
Nje ukuba wazi ukuba iingcango ziya kulunga ngokufanelekileyo, ungaqala ukukhusela izinto ngokusisigxina ngokukhusela izikrufu kwimingxunya yokuqala yokulinga. Xa uxhoma iingcango ngokwazo, kuya kufuneka ulandele imiyalelo yomenzi kwi-T.
Kukho iingcebiso ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni xa ufaka iingcango zaseFrance. Ingcebiso ephambili kufuneka uyiqaphele kukuba kufuneka uqiniseke ngokulinganisa ngononophelo. Oku akubandakanyi nje umgama ngaphakathi kwesakhelo somnyango, kuya kufuneka ulinganise umgama ojijekayo womnyango ukuze uqiniseke ukuba ungavula kwaye uvale ngokufanelekileyo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba kukho umahluko phakathi kweengcango ezityibilikayo kunye neengcango zesiFrentshi zemveli. Njengoko besibonile ngaphambili, iingcango zasefransi zivuleka ngokungathi ngumnyango wendabuko. Ngamanye amagama, bajikela ngaphandle okanye ngaphakathi njengocango oluqhelekileyo kwaye bafakelwe kwiseti yeehenjisi.
Iingcango ezityibilikayo, kwelinye icala, zibekwe kumkhondo okhokelwayo kunye nobunzima ukuze zona, njengoko igama libonisa, zityibilike zivuleke kwaye zivalwe ngokulula.
Zombini iinketho kunokuba lula ukuzisebenzisa ukuba zigcinwa ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, kunokuba nzima ukuba awuhambisani nolondolozo oluqhelekileyo. Ngomnyango oshenxayo, kuya kufuneka ugcine umkhondo ucocekile. Ukuba awuyenzi kwaye endaweni yoko uvumele ubumdaka kunye nenkunkuma ukuba yakheke, kunokwenzeka ukuba ubone imicimbi ngomnyango oshenxayo kumkhondo. Ngelixa linokulungiswa, kunokuba nzima ngakumbi ngexesha lomcimbi kunokuba, umzekelo, iseti yeehenjisi kwisibini seminyango yesiFrentshi enobunzima njengokuqina okanye ukukhwina.
Xa kuziwa kwixabiso, unokumangaliswa kukufumanisa ukuba kukho ukungangqinelani okumbalwa. Kwakhona, kuyehla kwizinto ozisebenzisayo, apho ubeka khona, kwaye ngubani omfumanayo ukuze ayifake ukuya kuthi ga kwixabiso ngqo. Iingcango ezityibilikayo zihlala zibiza imali encinci kodwa ngumahluko nje wokujikeleza i-100 yeedola okanye kunjalo.
Iingcango zaseFrance zinamandla amancinci ngakumbi kuneminyango yokutyibilika kuba iingcango ezityibilikayo ziiglasi ngokupheleleyo ngaphandle kokugcina umoya ulawulwa. Njengamacango esiFrentshi, nangona kunjalo, le minyango ihlala inyangwa ukunceda ngokusebenza kwamandla.
Icala elidityanisiweyo lokucoca iingcango, nangona kunjalo, kukuba bathatha indawo encinci. Kungenxa yokuba ngelixa iseti yeengcango zaseFrance zifuna indawo yokujikela ngaphandle ukuze zivuleke, ucango olutyibilikayo lumiselwe kwindlela kwaye aludingi gumbi longezelelweyo ukuvula.
Iingcango zokutyibilika zikhuselekile ngokunjalo. Kungenxa yokuba azinakunyanzelwa ukuba zivuleke kwaye igilasi ezenziwe ngayo ziqiniswa ukuba zingabinakho ukwaphuka. Oku akuthethi ukuba ezinye iintlobo zeminyango yaseFransi azikhuselekanga kodwa siza kufumana iindlela zokukhusela iingcango zaseFrance kamva.
Xa ujonga iingcango zaseFrance, eyona ndawo ifanelekileyo yokujonga into entsha ikwimveliso. Nangona kunjalo, ukwenza oku, kufuneka wazi ukuba ngoobani abavelisi beengcango zaseFrance ozifunayo. Kweli candelo, siza kujonga abanye abenzi beminyango abathandwayo baseFrance.
Umenzi wokuqala womnyango waseFransi kuluhlu lwethu nguPella. Ngokubanzi, iPella yenza iifestile neengcango. Zasekwa ePella, eIowa ngo-1925. Oku kwaqalwa ngokuqalwa kwescreen sewindow esazisonga sinyuka nanjengokuba iscreen sisenza. Ke, le nkampani yaqalwa kwaye yakhiwa kwizinto ezintsha. Baye banikwa ngaphezulu kwe-150 yoyilo kunye nemveliso yelungelo elilodwa lomenzi wechiza.
Xa kuziwa kwiminyango yaseFrance, zininzi izinto onokukhetha kuzo noPella. Zahlulahlula iimveliso zazo zibe zezangoku kunye nemveli. Iingcango zesintu ziintlobo zeminyango ezintsonkothileyo kuyilo lwazo kwaye iingcango zangoku zilandela uyilo oluncinci. Banikezela ngeminyango yesiFrentshi yazo zonke iintlobo. Tyelela iPella iwebhusayithi ngeenkcukacha ezithe kratya.
Enye inkampani yefestile kunye nomnyango nguJeld Wen. Xa kuziwa kwiminyango yaseFrance, uJeld Wen ugxile kwiingcango zepatio. Njengokwazisa kwicandelo labo lomnyango wepatio kwiwebhusayithi yabo, uya kucelwa ukuba ulufuna oluphi uhlobo lomnyango. Ezi zitayile zibandakanya isitayile seminyango yesiFrentshi, iingcango ezityibilikayo, ucango olutyibilikayo oluninzi, kunye nomnyango wokugoba- ayilulo uhlobo lomnyango esiye sabhekisa kuwo njengeengcango zaseFrance. Banikezela ngeminyango ephindwe kabini phantsi kwecango labo langaphakathi.
UJeld Wen unomdla kuba wenziwa nase-Iowa malunga neminyaka engama-30 emva kwePella. Ziyaziwa ngobuchule kunye nokuzabalazela kwabo iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Ngale migaqo, unokuxhomekeka kuJeld Wen ukuze akunike iimveliso onokuzithemba. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela iJeld-Wen iwebhusayithi .
Okulandelayo yiAndersen yeWindows kunye neMinyango. Le nkampani liqumrhu elihamba kunye nangaphaya kwaye ezinye zeyona nto kugxilwe kuyo kukulula kunye nokusebenza. Ngenkqubo yabo yokuNxibelelana ngokuLula, ukufakela kuthatha iinzame ezimbalwa kwinxalenye yakho okanye kwiqela leqela lofakelo. Oku konga ixesha kunye / okanye imali ngexesha lenkqubo yofakelo.
Xa kuziwa ekukhetheni iingcango zaseFrance, iAndersen Windows kunye neeMinyango zijolise kwiingcango zepatio. Ezi minyango ngokuyintloko ziingcango ezixhonyiweyo zemveli kodwa zikwanalo necandelo lokutyibilika kweengcango abazibiza ngokuba yiminyango yokutyibilika. Unokujonga kwakhona iingcango ngemathiriyeli kodwa azizukubangcango zesifrentshi xa ukhangela ngale ndlela. Fumana ulwazi oluthe kratya malunga noAnderson iminyango yabo iwebhusayithi Apha.
IMarvin Doors ngumvelisi olandelayo kuluhlu lwethu. Lo mvelisi yenye yosapho lweemveliso kwaye uneengcango ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Xa kuziwa kwiminyango yaseFrance, bajolise ikakhulu kwiingcango zepatiyo apho kudidi lwabo baguqukayo kunye neengcango ezityibilikayo. Icandelo labo lesitudiyo sewebhusayithi yabo libandakanya iseti yeengcango zaseFrance zakudala kunye nomnyango ophindiweyo.
Omnye wemigca kaMarvin eyaziwayo yiminyango ye-Impact. Ezi ngcango zaseFrance zenzelwe ukumelana nemozulu egqithileyo ezinje ngezaqhwithi. Baza ngobhedu okanye nge-beige kwaye bane-Impact Zone 3 yokusebenza okulinganisiweyo oku kuthetha ukuba ezi ngcango azizukunikezela kwizinto. Oku kuyabulela ekusebenziseni iglasi enobushushu, elaminethiweyo kunye negqunyiweyo.
Njengophawu, uMarvin uthembisa ukuba abazinikeleli ekusebenzeni kuphela kodwa nasekucebiseni iindawo ohlala kuzo kwaye usebenze nazo. Usapho lweMarvin lweemveliso lubandakanya amanye amagama ambalwa -Ukunyaniseka kunye ne-Infinity, ukuba ichaze- kodwa nguMarvin uqobo ozisa iminyango emihle yesiFrentshi. Funda ngakumbi malunga neminyango kaMarvin yabo iwebhusayithi .
Okokugqibela, sineeMilgard Windows kunye neeMinyango. Xa kuziwa kwiminyango, iMilgard Windows kunye neeMinyango zijolise kwiingcango zepatio. Zineendidi ezahlukeneyo zeengcango zesiFrentshi onokukhetha kuzo kule ndawo, nangona kunjalo, kubandakanya isimbo sesiFrentshi sokutyibilika kweengcango zepatio, iingcango zeepatio zesiFrentshi, kunye neengcango zepati zaseFrance. Unokukhetha iindidi ezahlukeneyo zezinto ezinje ngomthi, ivinyl, ialuminiyam, kunye nefilglass.
I-Milgard Windows kunye neMinyango ithi bazinikele ekunikezeleni ezona mveliso zibalaseleyo kubathengi babo ngaphezulu kwako konke. Ngokwenza oko, bathi bayayixabisa inkonzo yabathengi ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu. Ngolu luvo kunye neminyaka engama-50 yokuyila, basebenzela ukwenza eyona minyango ingcono yaseFrance kwasekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Jonga imizekelo yeengcango zeMilgard kuzo iwebhusayithi .
Xa ufuna iingcango zaseFrance, unokufuna ukuqwalasela iingcango zase-antique zase-french. Oku kunika ikhaya lakho ubumnandi, idrama entle kwaye inokukunika ukujonga okwenyani ukuya kwixesha. Uzifumana phi ezi ngcango zakudala zaseFrance?
Eyona ndlela ilula yokufumana kwi-Intanethi. Ngokufana nantoni na namhlanje, unokufumana iingcango zase-antique zesiFrentshi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Uninzi alunikezelwanga ngokuthe ngqo kwiminyango ye-antique kodwa kunamalungu endlu ye-antique ngokubanzi. Iiwebhusayithi ezimbalwa onokuthi uqalise ukuzikhangela kuzo ziya kuba zizinto ezindala eziDala kunye neeMbali zeNdlu.
Kukho iindawo onokujonga kuzo iingcango zase-antique zase-french. Enye yezo ndawo yintengiso yezindlu. Ukuthengiswa kwezindlu kukwabizwa ngokuba kukuthengisa iithegi kwaye zisetyenziselwa ukuthengisa ilifa losapho-yiyo loo nto igama. Ezi ziindawo ezintle zokwenza izinto ezixabisekileyo ezinje ngeengcango ze-antique kuba iindawo zivela kwindawo enengeniso ephezulu kuneyona nto ithengiswayo kwigaraji. Ukuthengiswa kwezindlu kunokukunika ixabiso eliqingqiweyo lezinto ozifunayo okanye unokuba nethuba lokubhida ngezinto ezo. Xa ufumana iingcango zase-antique zase-french, banokubonisa ubudala babo. Ukulwa noku, le minyango iya kufuneka ibuyiselwe. Le projekthi ungayenza okanye ungayenza- inokuba yiprojekthi enkulu ye-DIY kodwa kulula ukufumana umntu oza kukunceda.
umthengisi ogqibelele UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
yintoni ukufumana umyeni wam isikhumbuzo sethu
Ibhentshi leshawa yemabhile